Soomaalidu waxay Ku maahmaahdaa (Aqool xumo irmaan guran aa Ka daran). - Latest News Updates
Soomaalidu waxay Ku maahmaahdaa (Aqool xumo irmaan guran aa Ka daran).
Waryaa. Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa (Aqool xumo irmaan guran Ka daran)
Waryaa, waryaa, Somaaligaagan baadida ah, taagan dhinac xun wax loo tusay.
Waryaa — beenta laguu sheegay ha ii sheegin, waxaa lagu yiri: Somalia waa wadan Abaar iyo gaajo dilootay, TV- yada ayaa lagaa tusay, waqtiga jiilaalka ah. Iyaguba waa qabaan xilli dalkoodu uu Jiilaal yahay oo meel kasta Baraf cad uu qariyay, iyo waqti ey wax tacbadaan.
Waryaa — Anigu meelna uma socdo, Dalkeyga barwaaqada ah ayaan joogayaa, indho Ka duwan kuwaaga ayaana Ku fiirinayaa. Hal dhinac yaan wax lagaa tusin.
Waryaa — Waxaa lagu tusay sawiro hal dhinac ah, Qof baahan oo la leeyahayna intaa oo Vitamins ah ayaa Ka maqan korkiisa, kadibna mucaawino Ku jirto weel dabada Ka daloola ayaa loogu Soo shubaa, si khayraadka Dalkiisa looga qaato.( F.S: 1, 2 & 3aad)
Waryaa — ma inkirin in Aqool ( maamul) xumo i heeyso, Laakin Allaah Taajir ayuu iga dhigay.
Waryaa — Anigu Ka tagi maayo wadankeeyga, Maamul xumada i heyso ee kuwaas beenta ka fidiyay ey Kuu sheegeena waan Ka baxayaa.
Waryaa — yaan been laguu sheegin iska siib indhagashiga ( eye glasses) Ka beenta ah ee laguu galiyay, ama haddii Baraf qoboow uu Ku indha tirin, Dalkeygu waa kan haddaad leedahay indho caafimaad qabo oo aad wax Ku fiiriso.
Waryaa Beenta Media-yahu kugu cabay ha igu cabin.
Waryaa, waryaa, waryaa, ha iga xanaajin, wax hubso, haddii kale!!!
Ogoowna Anigu Dal kale uma socdo, Sabab aan uga haagirana Allaah ayaan Ka magan galay.
Ka Raali noqo ( kalmadda “waryaa” in aan Ku iri). Walaaloow inta aadan ii jawaabin Daawo dalkeeyga ( F.S:4-30)